Nke a bụ ihe anyị maara banyere iPhone SE na iPad Pro | Akụkọ akụrụngwa
Nke a bụ ihe anyị maara banyere iPhone SE na iPad Pro
Na Machị 21, Apple akpọọla ọtụtụ igwe okwu ka ha bịa na mmemme a ga-eme na Cupertino. Ọchịchị ka anyị amaghị ihe anyị ga-ahụ na ihe omume ahụ, agbanyeghị asịrị niile na-egosi na A ga-egosiputa ọhụụ iPhone SE na iPad Pro na ihuenyo 9,7 nke anụ ọhịa. Na mgbakwunye, ọ ga-ekwe omume na anyị na-ahụ ụfọdụ ozi ndị ọzọ metụtara Apple Watch, ọ bụ ezie na a na-achị ya na anyị nwere ike ịhụ ụdị ọhụụ nke smartwatch.
Na-erughị otu izu ị ga-aga tupu ihe omume Apple emee, anyị chọrọ ịchịkọta n'isiokwu a ozi niile anyị maara banyere ngwaọrụ ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ nke Tim Cook na-eduzi. Dịka anyị gwara gị, anyị enweghị ozi gbasara gọọmentị, yabụ ihe ọ bụla ị ga-agụ ebe a bụ data sitere na asịrị e mere ka a mara na nchapu nke mere.
1 iPhone SE ma ọ bụ ofufe nke 4 sentimita asatọ
2 Onye bụ onye a iPhone SE maka?
3 iPad Pro nwere ihuenyo 9,7-anụ ọhịa
4 A ga-enwekwa akụkọ maka Apple Watch
iPhone SE ma ọ bụ ofufe nke 4 sentimita asatọ
Nnukwu kpakpando nke ihe omume na-esote Mọnde, Machị 21 ga-abụ iPhone SE (mbipụta pụrụ iche), a mobile ngwaọrụ ga-enwe a obere ihuenyo, kpọmkwem nke 4 sentimita ma ọ nwere ike ịbụ iPhone echekwara ogologo oge.
Ogologo oge ha na-ekwu okwu banyere ohere Apple nwere ike ịmalite smartphone dị ọnụ ala. Site na mwepụta nke iPhone 5C nke ahụ ga-ekwe omume, ma ugbu a ọ dị ka iPhone SE ga-abịa bụrụ eziokwu. Ọnụ ya dịka ịkọ nkọ nwere ike ịdị n'etiti euro 350 na 450.
Ọhụrụ a iPhone ga-abata na ahịa iji dochie ugbu a iPhone 5S nke ka na-eresị ya n'ahịa na nke nwere ọnụahịa yiri nke ahụ echere maka iPhone SE. Banyere uru nke ngwaọrụ mkpanaka a, dịka anyị kwurula, ọ ga-arịgo ihuenyo 4-anụ ọhịa, nke na-agaghị enwe teknụzụ Force Touch na n'ime anyị ga-ahụ ihe nhazi A9, yana 1GB RAM.
Banyere nchekwa dị n'ime, Apple ga-adaba ọzọ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile kwenyere na ọ bụ njehie, 16GB na ụdị 64GB ga-erekwa. O doro anya na ọ ga-enwe njikọta WiFi, ya na Tuch ID, NFC maka ọdịnihu Apple Pay yana Siri nwere ọrụ mgbe niile.
Banyere igwefoto nke iPhone SE a, nke doro anya bụ otu n'ime ihe kachasị amasịkarị ndị ọrụ, enwere ọtụtụ nsụgharị. Fọdụ na-ekwu na igwefoto igwefoto nwere ike ịdị n'etiti 8 na 12 megapixels. Agbanyeghị, ọtụtụ olu ndị ọzọ kwenyere na igwefoto nwere ike ịdị ka nke anyị nwere ike ịchọta ugbu a na iPhone 6S.
Banyere imewe ahụ o yiri ka anyị ga-ahụ iPhone SE dị ka iPhone 5S, ọ bụ ezie na ọ nwere akụkụ gbara gburugburu yana ọdịdị ya emelitere na ihe anyị nwere ike ịhụ na iPhone 6S. Anyị ka kwesịrị ịma ụdị agba iPhone ọhụrụ a ga-adị, ọ bụ ezie na asịrị na-egosi na ọ ga-erute ahịa n'ọtụtụ agba.
Onye bụ onye a iPhone SE maka?
Dị ka anyị kwugoro na ihe karịrị otu oge Nke a iPhone SE na-echebara ndị ọrụ ahụ niile na-achọ ama na obere ihuenyo na obere ngwaọrụ.
IPhone ọhụrụ a ga - adị ka ịnwe iphone sitere na ezinụlọ 6S, nwere otu ike, arụmọrụ yana igwefoto pụtara ìhè, mana na nha karịa. Mgbe ụfọdụ, ọtụtụ mmadụ na-agbagọ inwe obere ọnụ yana nke nwere obere uru. Na iPhone SE echiche a ga-akwụsị kpamkpam ma ọ bụ nwee olileanya.
Ọnụ ya ga-ekwupụtakwa onye ọhụụ ọhụrụ a na-eche ihu na nke ahụ bụ na ọ bụrụ na ọnụahịa ya rịrị elu nke ukwuu, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ahịa ya ga-adị ala karịa.
iPad Pro nwere ihuenyo 9,7-anụ ọhịa
O yiri ka ọ bụghị karịa na ihe omume na Machị 21 anyị ga-ahụ iPad ọhụrụ, ọkachasị a ọhụrụ version nke iPad Pro nke ga-ahụ ya na ihuenyo belata 9,7 sentimita asatọ. Guysmụ okorobịa nọ na Tim Cook yiri ka ha chọrọ ịtụkwasị ihe niile dị n'ahịa mbadamba na ezinụlọ Pro wee si otú a kwụsị ikuku Ikuku.
Dabere na asịrị niile, otu n'ime ozi ọma ole na ole anyị nwere ike ihu bụ ogo ihuenyo na nke ahụ bụ ihe nhazi ahụ ga-adị ka nke iPad Pro, ya bụ, A9X ma nwee 4GB RAM. Na mgbakwunye, ihuenyo ahụ ga-enwe nkwado maka Apple Pencil.
Akwadoghi ya, dị ka enweghị data n'isiokwu a, mana ọ ga-ekwe omume karịa na anyị ga-ahụ keyboard dị ka ngwa maka iPad Pro ọhụrụ a, dịka ọ merelarị dị ka iPad Pro nwere nnukwu ihuenyo.
A ga-enwekwa akụkọ maka Apple Watch
El Apple WatchOtu n'ime ngwaọrụ kpakpando nke Apple ga-enwetakwa ozi dị mkpa, ọ bụ ezie na ọ nweghị ikpe anyị kwesịrị ịtụ anya ịhụ ụdị ọhụrụ nke smartwatch. Iji nwee ike ịhụ Apple Watch 2 ọhụụ anyị ga-echere ọnwa ole na ole, ikekwe otu ihe ahụ iji hụ iPphone 7 nke n'ime ụbọchị ndị na-adịbeghị anya anyị amatala asịrị mbụ.
Asịrị nwere ya na Cupertino ga-ewebata sọftụwia ọhụrụ maka igwe elele anya. Mgbe ọtụtụ betas amalitela n'ahịa, WatchOS 2.2 ga-eme ka ọ bụrụ nke gọọmentị, na-etinye akụkọ na-atọ ụtọ.
Gụnyere kwa Anyị ga-ahụ ozi ọma gbasara ngwa yana ọ bụ na eriri ọhụrụ ga-adị na ahịa n'oge na-adịghị anya, na agba dị iche iche na agba dị iche iche, nke ndị ọzọ ma ọ bụ ụdị nwere ike rụpụta nke na-enyere aka ịhazi ngwaọrụ ahụ ma nye ndị ọrụ ohere ọhụrụ.
O rughi otu izu rue mgbe Mkpokọta ọhụrụ ga-ewere ọnọdụ, nke a ga-ebufe ya n’akụkọ. Kedu ka ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, ị ga - enwe ike ịgbaso ihe niile na - eme na mmemme ahụ ma mara omimi na ngwaọrụ niile ewepụtara ebe ahụ site na Actualidad Gadgdet. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịhapụ ihe ọ bụla gbasara iPhone SE ma ọ bụ iPad Pro, gaa na anyị kwa ụbọchị ma nwee netwọkụ mmekọrịta anyị na aka.
Ì chere na Apple ga-ewebata ngwaọrụ ọzọ na mgbakwunye na iPhone SE na iPad Pro?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Nke a bụ ihe anyị maara banyere iPhone SE na iPad Pro
Heitor hụrụ dijo
M na-anọ !!!!!! Do na-eme ọtụtụ njikọta nke teknụzụ, gbaghara m, achọghị m ịkpasu gị iwe ọzọ, enwere ihe ị na-ekwu ugboro ugboro. . nke teknụzụ ị na-aza ọtụtụ bụ nke m mụrụ afọ 40 gara aga ... cheta na anyị anọkwaghị n'ọdịnihu nke teknụzụ ọzọ nke a bụ 2016 ọ bụghị 1976
Zaghachi Heitor Lopes
Etu esi lelee ma soro Apple Keynote ndụ
7 ihe mere na ị na-ekwesịghị ịzụta a Samsung Galaxy S7